Mini danpon laser, Shanghai module cagaaran, Laser Module - Jiabei
Aspheric Collimator Glass Lens for Diode
Laser Green Tilmaamidda
na ku saabsan na ku saabsan
Shanghai JIABEI alaabtii SHIRKADDA la aasaasay sanadkii 2003, waa shirkad dhafan ee cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta laser for warshadaha sahanka dalka. waxyaabaha Our ka mid ah heerarka laser, modules laser, tilmaamo laser iyo qaar ka mid ah qalabka kale ee la xidhiidha dhismaha. Waxay ku taallaa magaalada casriga ah ee Shanghai kaas oo sidoo kale waa mid ka mid ah magaalada ugu quruxda badan iyo saameynta badan ee Shiinaha.
Waxyaabaha Featured Waxyaabaha Featured
VH-525 Green 5 Lines
VH-3D Green 12 Lines 360 ° Vertical & Horiz ...
VH-30G Mini Green One Vertical Line
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Wararkii Ugu Danbeeyay Ee
Maxay yihiin noocyada kala duwan ee heer ruux
1 .. Qoondaynta sida ay mabda 'shaqada (1) heerka ruux Farsamada heerka Farsamada waxa loo qaybin karaa saddex nooc: heerka bar (sidoo kale loo yaqaan heerka fitter), heerka jir iyo heerka group. Waxaa loo tilmaamay by xumbo heerka, si heer farsamo waxaa kaloo loo yaqaan heerka heerka ama nooca xumbo. heerka Ruuxa. heerka ruux strip waa qalab lagu qiyaaso heerka qaab leh dusha saldhig cabbiraadda ah, iyo xumbo heerka fadhiya ama waxbaa laga beddeli karaa qaraabo in surfa saldhig oo qiyaasa ...
Sidee heerka ruuxa ka shaqeeya
tube Heerka heerka ruuxa laga sameeyey oo muraayad. darbigiisa gudaha hoose tube heerka waa dusha a qalooca la gacan gaar ah dhaf. tube wuxuu ka kooban yahay dareere ah. Marka heerka waxaa janjeerin, naqas in dhammaadka heerka dhaqaaqo tube heerka si loo ogaado booska heerka. The ka weyn gacan ka mid ah dhaf derbiga hoose oo heer ruuxa, sare ee xallinta, iyo yar ee gacan ka mid ah dhaf, ay hoos u xallinta. Sidaa darteed, gacan ka mid ah dhaf ah s ka ...
Maxay yihiin hababka kormeerka ee heer ah?
heerka A waa aalad qiyaaseed caadi ah in lagu qiyaaso xaglaha yar. In warshadaha farsamo iyo wax soo saarka qalab, waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro xaglaha rabitaan qaraabo ah in ay booska siman, ku planeness iyo toosnaanta of rail guide qalabka qalab mashiinka, meel siman oo booska toosan qalabka rakibo, iwm Next, Waxaan Doono sharxi aqoonta heerka si faahfaahsan. 1. hordhac kooban oo si heer heer A waa aalad qiyaaseed caadi ah in lagu qiyaaso yar oo ...
aqbalana , Total Station , 360 Rotary Heerka Laser Green Ray , Tripod , Wall labixiyo , Laser Light ,